आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मु#द्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि ! - समृद्ध नेपाल
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मु#द्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि.पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालको प्रहार खेप्ने नायीका हुन् आँचल शर्मा । उन’ले डाक्टर उदिप श्रेष्ठसंग विवाह गरेपछि उनका बारेमा अनेक प्रशंग जोडेर समाचार बनाइए । कला’कारको ब्यक्तिगत जिवन सर्वसा’धारणका लागि रोचक लाग्छन् ।
उनीहरु आफ्नो मनपरेका कलाकारका ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा जान्न चाहन्छन् । त्यसैले कलाकारका ब्यक्तिगत जिवनसंग जोडिएका विषय मिडियामा बिक्छन् । त्यसैले कलाकारका हरेक कृयाकलाप समाचार बन्ने गर्छन । तर कहिले काँही आफ्नो भ्युअर बढाउने वहानामा कलाका’रलाई अनेक ला#च्छना लगाएर पनि समाचार बनाइन्छन् ।
जसमा कुनै सत्यता हुँदैन । अनुमानका आधारमा बनाइने त्यस्ता समाचारका कारण कलाकार पीडित हुन्छन् । पछिल्लो समय नायीका आँचल शर्माको विवाह जिवन र उनको विवाह पूर्वको जिवनका बारेमा अनेक अनुमान गर्दै समाचार बनाइए । उनका श्रीमान उदिपका बारेका पनि अनुमान गरेर अनेकथरी समा’चार बने । तर उनीहरु दुवै जनाले त्यस्ता अफवाहको पर्वाह गरेनन् । विवाह पछि केही निकै पेचिला विषयमा भने उनीहरुले प्रतिकृया दिए ।
नायीका आँचलले दर्ता नभएका त्यस्ता केही युट्युव र अनलाईनले आफ्ना वारेमा त्यस्ता अफवाह फैलाएको बताइन् । अर्की नायी’का माल्विका शुब्बासंगको लाइभ कुराकानीका क्रममा उनले त्यस्तो बताएकी हुन् । उनी त्यस्ता मिडिया र सामाजिक सञ्जालको विरुद्धमा उजुरी गर्न प्रहरी कार्यालय टेकु पनि पुगेको बताइन् ।
सपनाले बल्ल मुख खोलिन, रुदै यस्तो भन्छिन म माथि बिनयले जे गर्यो !
भारतका गृहमन्त्री अमित शाह कोरोना संक्रमित !
यी नै हुन् हजारौं गरिव दुखि बिरामीको सेवा गर्दै आएकी स्कुटर दुर्घटनामा परी सदाको लागि अस्ताईन् !
जेलबाट छुटेपछि पशुपतिमा लास जलाउदै बिनय; सपनाको नाम लिदै डाको छोडेर रोए !
सरकारले कुहिएको भनेर माटोमा गाडेको ८ सय बोरा दाल जनताले खनेर लगे !
कुमारी सुबेदीको पिडा : मर्ने प्रयास कति गरे तर ८२ बर्सिय आमा पाल्नु छ !